ရှန်ကျန်းပလြော့နည်းပညာ Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
အမြဲအဖြစ်, ပလြော့က၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း philosophy.Shenzhen တောက်ပနည်းပညာ Co. , Ltd အဖြစ် "လှုပ်ရှားမှုစကားလုံးများကိုထက်ပိုမိုကျယ်လောင်ပြောတတ်" ပေါ်တွင်အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ တဲ့ professional နဲ့ LED Display ကို service provider ကထက်ပို $ 10 သန်း၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်နှင့်အတူ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တောက်ပ 3000sqm ၏ဧရိယာနှင့်အတူ Gongming လမ်းရှိ Lilan နည်းပညာပန်းခြံ, Guangming ခရိုင်အတွင်းတည်ရှိသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကပလြော့လျင်မြန်စွာကြီးထွားထားရှိမည်ပြီ ပလြော့၏ထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုနိုင်ငံပေါင်း 100 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသို့ရောင်းချခဲ့ကြ ...
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပြီးသဘောထားကြီးမှု man.We ဖြစ်ခြင်းဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေအသုံးချပြီးနှင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလိုက်စား, ငါတို့အချည်းနှီးသောစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်တိုင်းအမိန့်နှင့် ပတ်သက်. ပါပြီ။ တိုင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးမြင့်စံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဖြစ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်သောစေရန်, ငါတို့သည်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖော်ထုတ်မယ်အဆောက်အမိတ်ဆက်ပေး။ သူတို့အားအားထုတ်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့, အီး, CCC, FCC သည်ခွင့်ပြုချက်စသည်တို့ကိုအဖြစ်အများအပြားလက်မှတ်များ, ကူးမြောက်
တောက်ပသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုတင်းကြပ်စွာ ISO9001 မှလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါတယ်: 2008 လက်မှတ်တွေစနစ်နှင့် 7s စီမံခန့်ခွဲမှု LED စက်မှုလုပ်ငန်း၏စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်လေးနက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်သော သာ. ကြီးမြတ်စုံလင်ရှာ standard.To ။ ဤတွင်ကျနော်တို့တိုင်းက client သည်အမိန့်နှင့်တိုင်းတုံ့ပြန်ချက်ပလြော့တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုကတိပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်အဖြစ် "ဤလောက၏အလှတရားဖေါ်ပြသည်" နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောရောင်စုံနှင့်တောက်ပသောကမ္ဘာကြီးကိုနှင့် ပတ်သက်. ရဲ့လက်၌လက်ကြပါစို့။